Wararka naga soo gaaraya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in diyaarado laga leeyahay dalka Kenya ay duqayn ka geys teen deegaanka lagu magacaabo Deelay oo ka tirsan degmada Garbahaaray ee Gobolka Gedo. Diyaaradaha geys tay duqeynta ayaa la sheegayaa in ay ka qayb qaateen dagaal u dhexeeyeye ciidamo taageersan DFKM oo gacan ka helay ciidanka dalka Kenya iyo ciidanka Al-shabaab oo iyagu lahaa weerarka.
Saraakiil u hadlay ciidanka dalka Kenya ayaa sheegay in diyaaradahooda ay weerareen fariisamo ay ku sugnaayeen ciidanka urur ka Al-shabaab ayna khasaaro gaarsiiyeen, dhinac ciidanka taageersan DFKM ayaa iyagu ilaa hadda ka hadal khasaaraha ka dhashay dagaalka ay maanta ciidamo ka tirsan ururka Al-shabaab ku qaadeen fariisamo ay ku wada sugnaayeen ciidanka DFKM iyo kuwa dalka Kenya.
Saraakiisha ciidanka ururka Al-shabaab ayaan iyaguna weli dhinacooda ka hadal dagaalka dhacay iyo weliba diyaaradaha duqeynta ka geys tay deegaanka Deelay ee ka tirsan degmada Garbahaarey ee Gobolka Gedo. Ma ah markii ugu horeysay ee diyaaradaha laga leeyahay dalka Kenya ay duqeyn ka geystaan Gobolka Gedo iyo weliba Gobolka Jubada Hoose oo ay dagaalo iyo iska horimaad iska caabin ah kala kulmeen ciidanka ururka Al-shabaab ee gacanta ku haya weli degaano ka tirsan Gobolka Gedo iyo Gobolka Jubada Hoose.